Nzira Dzononga kuZimbabwe kuMusangano weVashanyi kuVictoria Falls
Nzira dzose dzichange dzichinanga kuZimbabwe svondo rinouya apo nyika dzemu Africa dzichange dzichiita musangano mukuru we Africa Travel Association, ATA, ku Victoria Falls.
Victoria Falls, iyo inozivikanwa pasi rose nehunakwu hwemapopoma ayo, imwe yenzvimbo nomwe dzinoyevedza pasi rose, kana kuti Seven Wonders Of The World.
Musangano wechimakumi matatu nemanomwe weATA, uyo uri kutanga musi wa17 Chivabvu uchipera musi wa22 Chivabvu, uchapindwa nevanhu vanodarika mazana mana, avo vanosanganisira makurukota emuAfrica anoona nezvekushanya kwevanhu mudzinyika.
Vakuru vakuru ava vachange vachizeya nyaya dzekushanyirana muAfrica pamwe nekukurudzira vanhu vemuAmerica kushanyira Africa sezvo America iri iyo nyika ine hupfumi hwakasimba pasi rose.
Studio7 haina kukwanisa kutaura negurukota rezvekushanirwa kwenyika, VaWalter Mzembi, kuti tinzwe divi rebazi ravo pahurongwa hwekuVictoria Falls.
Musangano uyu uri kutarisirwa kuvhurwa zviri pamutemo nemutevedzeri wemutungamiri wenyika, Amai Joyce Mujuru.
Musangano uyu uri kutarisirwa kupa Zimbabwe mukana wekugadzirira musangano mukuru we United Nations World Tourism Organisation - 2013 General Assembly uchaitirwa ku Victoria Falls neLivingstone kuZambia gore rinouya.
Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzinoti musangano uyu wemazuva matanhatu uchaita kuti Zimbabwe iwane mari yakawanda sezvo vashanyi vachange vachishandisa mari munguva dzichange dzichiitwa musanganouyu.
Nyanzvi idzi dzinotiwo musangano uyu une chinangwa chekukwezva vashanyi vemu America, inova nyika hombe ine hupfumi hwakasimba pasi rose.
Sangano reATA rakavambwa muna 1975 riine chinangwa chekukurudzira kushanyirana kwenyika dzemuAfrica senzira yekukurudzira mabhizinesi pamwe nekusimudzira nyaya dzehupfumi, kunzwisisa mamiriro akaita nyika dzemu Africa.